Wasiir shaaciyey qorshe yaab leh oo Al-Shabaab ay ku fakareyso |
Wasiir shaaciyey qorshe yaab leh oo Al-Shabaab ay ku fakareyso
Kadib Qaraxyo iyo Dilal isdaba-joog ah oo gilgilay Muqdishu Maalmihii ugu danbeeyay, ayaa Wasiirka Difaaca ee DFS, ahna sii hayaha Xilka Wasiirka Amniga Maxamed Sheikh Xasan Xaamud waxa uu sheegay qorshaha Al-Shabaab.
Wasiirka ayaa shaaciyay in Kooxda Al shabab sababta ay u labo jibaartay Weeraradeeda ay tahay in Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya kala wareegto gacan ku haynta Magaalada Caasimadda ah.
“Waxaan rabaa inaan adiin sheego Mar 2-aad, in uu billowday Dagaal la doonayo in na looga barakiciyo Muqdisho, waxaana ka codsanaynaa Shacabka in ay gacan naga siiyaan sugida Amaanka, oo ay la shaqeeyeen Hay’adaha Amaanka, waayo Dowladda oo kaliya ma sugi karta Amaanka,” ayuu yiri Wasiir Xaamud.
Sidoo kale Wasiirka ayaa xusay in Amniga Muqdisho aysan sugi karin Dowladda, haddii aysan helin Taageerada Shacabka, isagoo intaasi ku daray in Magaalada la isku haysto oo Al shabaab markale soo rogaal celisay si ay ula wareegto oo meesha ugu saarto Mas’uuliyiinta Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Wali waxa aan jirin Wasiiradda Amniga Cid loo magacaabay tan iyo markii Bishii May uu Xilkaasi iska casilay C/kariin Xuseen Guuleed oo isagu lagu eedeeyay in uu ku fashilmay Sugida Amniga Muqdisho, oo markaasi ka dhaceen Weeraro kuwii ugu Cuslaa oo Al shabaab dalka ka fuliyaan.
Waa arrin yaabkeed leh in dowladda Soomaaliya ay aaminsan tahay in Al-Shabaab ku fikiri karto inay kala wareegto Muqdisho.